Madbacadda Bile M Hashi, Gotebörg, 2003
ISBN: 91-972411-0-5 - sheeko
Beesha Janno waxaa ku nool hooyo la murugsan labadeeda wiil oo ay laba reer u kala dhashay oo labo ciidan u kala dagaalamaya, Labadaa ciidan oo dagaal iskula jira. Boobka, dhaca, iyo dhiiga oo socda ayaa wiilashi midkood kusoo noqonayaa beeshi oo guursanayaa kii kale gabar uu axdi la galay. Dagaal aanan hadaf iyo ujeedo loo dagaalamayo aysan caddeyn awgiis waxaa sii kordhaya colaada walaalaha dhexmareysa. Sidey hooyadu ugu guuleysan kartaa inay demiso dabkan sheydaanku ka dhex shiday labadeeda wiil?. Ilaa naftu ka baxeyso ayay arrinkaa xalkiisa la xarbineysaa.
Janno waa qiso ka hadleysa jaceylka sokeeyaha dhexmara, Waxay qisadu ka hadlaysa jaceylka walaalo, jaceylka wiil iyo waalid iyo jaceylka rag iyo dumar dhexmara. Waxaad qisadan la socod doontaa taariikhda Asli iyo labadeeda wiil Ceynte iyo Keyse iyo gabadha ay isla jeclaadeen. Waxey kunool yihiin beel aad u qurux badan eebena nimco ku maneystay, waxaase beesha lagu saladi doonaa xin, xanaaq, xumi, xoolo yari, boob, dhac, dhiig, murugo iyo mooryaan ilaa berigi dambe ay isku kaashadaan, taa oo u hogaamin doonta nabad iyo naq!.
Bile M Hashi wuxuu ku dhashay Soomaaliya sanadkii 1971, wuxuu ku nool yahay laga soo bilaabo sanadki 1987 wadanka Sweden. Waxuu kala turjumayay afafka swedhishka iyo soomaaliga tobankii sanee ugu dambeeyey. Wuxuu ka qalin jabiyey jaamicada ingineeriya sanadkii 1998, wuxuuna markiiba ka shaqo galay shirkada Volvo. Wuxuu kaluu arday maanta ka yahay Jaamicada Göteborg University qeybta culuunta siyaasada.
Akhriste - 2010-12-16 05:01:34
axmed cadaani baxasan - axmed4me@live.com
asc walal salan xurmad bdn iga gudon xld cfmd wa side marka hore waxan ahay qof daneya shekoyinkaga macanta badan waliba si gaar ahaaned waxan ka helay janno side igu suuragaleysaa in an helo buugaasi fadlan ila so xiriir adigoo aad u mahadsan
Akhriste - 2006-07-19 09:00:26
Mulki Xaaji abuukar - atlaanta@hotmail.com
ugu horayn waan ku salaamay a.c.w.w salaan kadib waan kuu mahad celinayaa waxaan ahay qof xiieeya sheekooyinka waxaan aad uga helay shaqsiyadaada anigaa kaaga helay aqoontaada iyo wali sida aad u raadinayso aqoon sare ugu danbayn waxaan jeclaan lahaay in aan helo meel aan ka gato buugaagtaaada qaas ahaan jano Iyo inuu dahabku lacag dheeryahay waxaase iiga muhiimsanaan lahaayd in aan xariir kula sameeyo adiga maxamed ah gabagabdii waan kuu mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inaan sidaada oo kale noqdo xaga aqoonta
Akhriste - 2006-06-05 08:33:22
khadar - hanat2005@hotmail.com
i nead stoty book . love
Akhriste - 2005-04-18 17:55:07
edil isse - somalisister@hotmail.com
s.c.w.w. bacdi salaan waxa rab buuga la dhaho magaciisa janno marka waa qimahe lacagtsa mise xage lidinka hela fadlan ila soo xariira ok inta iyo nabadey s.c.w.w.
Akhriste - 2005-01-03 22:52:50
abdirizak - abdiyarek@yahoo.com
fadlan mar labaad ii soo sheeg sida aan u dalban karo buugtaada mahadsanid